Otu esi azụta ụgbọ ala na -enweghị kredit na United States - Ụgbọ Ala
iphone ka na -asị mba sim
mgbe iphone na -ajụ ihe ị ga -eme
iphone 5 kpọnwụrụ na logo apple
na & t na -achọ netwọk
Kedu otu esi azụta ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ? . Ọ bụrụ na ị kwagara na United States n'oge na -adịbeghị anya, bụrụ nwa akwụkwọ kọleji, ma ọ bụ na -ewepụtabeghị oge iji wuo ụlọ akụkọ kredit , ịzụta ụgbọ ala agaghị ekwe omume.
Agbanyeghị, ọ nwere ike ịchọ ụfọdụ nyocha ọzọ iji hụ na ị nwetara ozi ahụ onyinye kacha mma dị - nke, ọ dị nwute, ka ga -adị ọnụ ọnụ karịa ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ kredit siri ike. Nke a bụ ihe ịkwesịrị ịma.
Kedu ka enweghị akwụmụgwọ si emetụta usoro ịzụ ụgbọ
Ọ gwụla ma ị nwere ego iji zụta ụgbọ ala kpam kpam, ị ga -achọ ego iji kwụọ ụgwọ akụkụ ma ọ bụ ọnụahịa ire ere.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị akụkọ kredit Ọ nwere ike isi ike ikwenye ụfọdụ ndị na -agbazinye ego ka ha nye gị otuto. Nke a bụ n'ihi na akụkọ kredit mmadụ, yana akara kredit na -anọchi anya ya, na -egosi etu ha nwere ike isi kwụọ ụgwọ ha n'oge.
Ọ bụrụ na ịnweghị akụkọ kredit, ndị na -agbazinye ego enweghị ozi ọ bụla gara aga iji nyere ha aka ikpebi ma ị bụ onye mgbaziri ụgwọ. Maka ọtụtụ ndị na -agbazinye ego, ihe egwu dị oke elu, ha nwere ike jụ ngwa gị.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị na -agbazinye ụgbọ ala bụ ndị ọkachamara n'ịrụ ọrụ na ndị nwere obere kredit. Ọ bụ ezie na ọ ga -ekwe omume ịnweta ego site n'aka ha, ị nwere ike na -atụkarị anya ịkwụ ụgwọ ego mmasị dị elu na mbinye ego gị ruo mgbe ị nwere ike ịtọ akụkọ kredit dị mma nke ga -emezigharị mgbazinye ego n'ọdịnihu.
Ọbụlagodi na i tozuru Enwere ike ịmachi gị n'ụgbọ ala ndị eji eme ihe nwa oge, ọkachasị n'ihi na ụgbọ ala ọhụrụ na -efu ọnụ karịa ma ị nwere ike ghara iru eru maka mbinye ego buru ibu iji zụọ ọnụ ahịa ire ere.
N'ikpeazụ, ịnwe kredit ọjọọ nwere ike inwe mmetụta na -adịghị mma na ọnụego mkpuchi ụgbọ ala gị. N'ọtụtụ steeti, ndị insurers akpaaka na-eji ihe akpọrọ akara mkpuchi kredit iji nyere aka chọpụta ọnụego gị. Agbanyeghị na ọ gaghị ewelite ọnụego gị n'onwe ya, ọ nwere ike maka ihe ndị ọzọ. Kedu ụzọ ọ bụla, ị nwere ike tufuo ego gị.
Zụrụ ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ . Ọ bụrụ na ị na -achọ ego mgbazinye ụgbọ ala ma chọọ ka ị ghara iji ya mee ihe, enwere ihe ole na ole ị nwere ike ime. Nke a bụ ụfọdụ nhọrọ kacha mma maka ịzụta ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ.
Nweta onye nkwado
Ọ bụrụ na ị nwere onye ezinaụlọ ma ọ bụ enyi nwere nkwanye ugwu nke dị njikere itinye akwụkwọ maka gị, ị nwere ike nwee ike tozuo maka mgbazinye ụgbọ ala ọbụlagodi ụfọdụ ndị na -agbazinye ụgbọ ala ọdịnala nwere ike idepụ ya.
Nke ahụ bụ n'ihi na onye na-edebanye aha bụkwa onye iwu kwadoro ịkwụ ụgwọ ahụ. Yabụ na onye na -agbazinye ego maara na ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ, onye ọzọ nọ na mbinye ego nwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ iji zere kredit ọjọọ.
Chọọ ebe niile
Ọ dị mkpa ịtụle ngwaahịa ego ọ bụla, mana ọ dị mkpa karịsịa mgbe ị nwere kredit ọjọọ. Enwere ọtụtụ ndị na -agbazinye ego na -ana ọnụego ọmụrụ nwa na ụgwọ dị oke egwu, na -erite uru na ndị na -achọ kredit na -amaghị nhọrọ ha niile.
Edozila maka onyinye mbinye ego izizi ị nwetara . Nyochaa nhọrọ gị nke ọma iji chọta mbinye ego akpaaka nke dabara na ọnọdụ ego gị ugbu a, ka Sean Messier, onye nyocha ụlọ ọrụ kredit na Credit Card Insider kwuru.
Site n'iji ụdị mgbazinye ego dị iche iche, ị ga -enwe echiche ka mma nke okwu a na -anabata na nke anaghị anabata. Ebe nrụọrụ weebụ dị ka Auto Credit Express na -enye gị ohere ijikọ na ndị na -agbazinye ego nwere aha dabere na akara kredit gị, na -eme ka usoro nyocha ahụ dị mfe.
Ozugbo ị nwere ndị na -agbazinye ego ole na ole iji tulee, dozie na nke na -enye usoro kachasị mma maka ọnọdụ gị.
Otu ihe ị ga-elebara anya mgbe ịzụrụ ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ bụ onye na-ere ahịa na-enye ego n'ime ụlọ. Ndị a na -azụta ebe a, na -akwụ ụgwọ ebe a na -ere ahịa mgbe ụfọdụ anaghị akpọsa ndenye ego kredit ọ bụla ma ọ bụ na ha anaghị eche maka ihe akụkọ kredit gị dị.
Agbanyeghị, ụlọ ahịa ndị a na -anakarị ọmụrụ nwa dị elu karịa ndị na -agbazinye kredit ọjọọ, na ohere nke mgbake na -adịkarị elu. Ọzọkwa, ha nwere ike ghara ịkọ akụkọ ịkwụ ụgwọ gị n'aka ụlọ ọrụ mkpesa kredit atọ nke mba, nke nwere ike inyere gị aka ịtọ akụkọ kredit gị wee ruo eru maka ọnụego ka mma n'ọdịnihu.
Chekwa maka ịkwụ ụgwọ dị ala
Ụfọdụ ndị na-agbazinye ụgbọ ala na-arụ ọrụ na ndị na-agbazinye ego kredit nwere ike ịchọ nnukwu ego ịkwụ ụgwọ naanị iji belata ihe egwu ha nwere na mbinye ego ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere oge ịchekwa karịa, ị nwere ike belata ihe egwu kredit gị ma belata ọnụego ọmụrụ nwa gị.
Ọzọkwa, ka ịkwụ ụgwọ ala gị dị elu, obere ihe ị ga -agbaziri na obere ị ga -akwụ ọmụrụ nwa n'oge mbinye ego ahụ.
Tụlee ego onye na -ere ahịa
Eleghị anya ị hụla mgbasa ozi ebe niile: enweghị kredit, enweghị nsogbu. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ihe nwere kredit ọjọọ ma ọ bụ na-enweghị kredit ọ bụla iji gosipụta, ị nwere ike nweta ego n'aka onye na-ere ụgbọ ala aha gị? Ọfọn na ọtụtụ dabere na onye na -ere ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-emekọrịta ihe nke ọma, onye na-ere ahịa nke ama ama nke nwere njikọ na nnukwu onye na-ere ụgbọ ala, ọ nwere ike bụrụ mmasị gị ịkpọ oku ole na ole na onye njikwa ego wee jụọ maka nkọwa gbasara mbinye ego ahụ.
Mana ị nwere ike ịrụ ọrụ na onye na -enweghị kredit? Ma ọ bụrụ otu a, gịnị ka ha ga -achọ n'aka gị iji nye ego mgbazinye a? Ọ nwere ike ịbụ akụkọ gbasara ọrụ gị, ma ọ bụ ikekwe onye na-edebanye aha, mana ọ bụrụ na ị nwere ike inye ha ihe ha rịọrọ, ị nwere ike nweta ezigbo ego. Onye na -ere ahịa nke ọma nwekwara ike were gị n'ọrụ mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala.
Tụlee ụlọ akụ obodo na ndị otu kredit
Ndị otu kredit Ma ọ bụ ụlọ akụ obere obodo nwere ike nwekwuru ọmụrụ ime gị ego mgbe nnukwu ụlọ akụ anaghị eme. Ihe nzuzo dị ebe a bụ ịmara ebe ị ga -ele anya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike chọọ ịchọ ndị na-agbazinye ego nwere mmemme izizụta ụlọ nke mbụ. Ezubere ihe ndị a maka ndị na -enwechaghị kredit.
Ebe ọ bụ na ha ga na -ele anya karịa akara kredit gị, ha nwere ike nwee mmasị n'ihe ndị ọzọ: nchekwa ọrụ, akwụkwọ ịkwụ ụgwọ, ịkwụ ụgwọ ọrụ kwa ọnwa, yana ihe kpatara na ị nweghị kredit n'oge a. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ha chere dị mma, ị nwere ike nweta ego.
Ego mgbazinye ahịa
Taa, ị nwere ike ịchọta ahịa maka ihe niile, nke a gụnyere mgbazinye ego. N'okwu a, ị ga -arụkọ ọrụ na onye na -ere ahịa, onye ga -enyocha data ego gị wee gosi ndị nwere ike ịkwado gị okwu gị. Ha ga -ekpebi ma ha ga -enye gị mbinye ego ahụ, dabere na ozi ha nwetara n'aka onye na -ere ahịa.
Uru na ọghọm nke ịzụrụ ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ
Dịka ị hụlarịrị, ọ ga -ekwe omume ịnweta ụgbọ ala na -enweghị akụkọ kredit. Agbanyeghị, tupu ịmalite usoro a, ọ dị mkpa ịmata uru na ọghọm dị n'ime ya.
Uru: ọ nwere ike inyere gị aka iwulite kredit gị Ị nweghị ike iwuli kredit na -enweghị akwụmụgwọ, na mbinye ego ụgbọ ala sitere n'aka onye na -agbazinye ego nke na -akọ akụkọ ụlọ ọrụ kredit nwere ike bụrụ mmalite dị mma.
Uru: Nweta ụgbọ ala mgbe ịchọrọ ya Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere iji wuo akụkọ kredit gị n'ụzọ ọzọ, ịnweta mbinye ụgbọ ala kredit ugbu a nwere ike ibute ụgbọ ala ugbu a.
Uru: ị nwere ike refinance mgbe e mesịrị Inweta ego mbinye ụgbọ ala akwụghị ụgwọ dị oke ọnụ. Mana ka ị na -ewu akụkọ kredit gị n'ime afọ ma ọ bụ abụọ na -esote, ị nwere ike tinye akwụkwọ maka refinance mbinye ego mbụ gị, nwere ike na ọmụrụ nwa dị ala yana usoro mkpokọta ka mma.
Ọghọm: ọ dị oke ọnụ Ọbụlagodi na ị zere ịzụ ahịa ebe a, kwụọ ụgwọ ebe a, ị nwere ike kwụsị na ọmụrụ nwa karịa 20% - ihe m hụrụ mgbe m na -arụ ọrụ n'ịkwado ego ụgbọ ala. Dabere na uru ụgbọ ala gị na ego ole ị na -agbazinye, ị nwere ike mechaa kwụọ oke ọmụrụ nwa dịka i siri kwụọ n'ụgbọ ala ahụ.
Ọghọm: Ị ga -achọkwu ego maka ịkwụ ụgwọ ala Ọ ga -esi ike ịchọta onye na -agbazinye ego ga -akwado gị ụgbọ ala na -akwụghị ụgwọ ọ bụla. N'ezie, ọtụtụ oge ha na -achọ ịkwụ ụgwọ dị elu karịa ka ọ dị na mbụ iji nweta mbinye ego. Agbanyeghị, enweghị iwu siri ike yana ngwa ngwa, yabụ kpọtụrụ ndị na -agbazinye ego tupu itinye akwụkwọ maka terns.
Con: Ihe egwu nke wayo na ndị na -agbazinye ego Enwere ọtụtụ ndị aghụghọ na ndị na -agbazinye ego na -erite uru na ndị kwenyere na ha enweghị nhọrọ ọzọ. Ọ bụrụ na -ajụrụ gị ka ị kwụọ ego tupu ị banye n'isi onye na -ere ahịa ma ọ bụ okwu mbinye ego yie ihe jọgburu onwe ya (tọn ụgwọ na ọmụrụ nwa nke 30% ma ọ bụ karịa), ndị ahụ bụ nnukwu ọkọlọtọ.
Tụlee ichere ruo mgbe ị nwere ike ịtọ akụkọ kredit
Ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ma nwee ike chere obere oge tupu ịchọrọ ụgbọ ala, tụlee iwepụta oge iji wuo akụkọ kredit ma guzobe ezigbo kredit tupu itinye akwụkwọ maka mgbazinye ụgbọ ala.
Otu ụzọ isi mee nke a bụ ịgbakwunye akaụntụ enyi gị ma ọ bụ kaadị kredit dị ka onye ọrụ enyere ikike. Ọ bụrụ na akaụntụ ahụ nwere akụkọ ịkwụ ụgwọ dị mma yana obere itule, ị nwere ike nweta uru kredit nke akaụntụ ahụ na -enweghị ibu ọrụ ịkwụ ụgwọ.
Wayzọ ọzọ bụ imepe akaụntụ kaadị kredit nke gị. Kaadị kredit echekwara bụ nhọrọ maka ndị na -enweghị kredit. Kaadị ndị a na -arụ ọrụ n'otu aka ahụ na kaadị kredit oge niile, mana ha chọrọ nkwụnye ego nchekwa dị n'ihu, nke ị nwere ike ịlaghachi mgbe ị gosipụtachara iji kaadị kredit ma ọ bụ mgbe ị mechiri akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ izere nkwụnye ego, enwere ụfọdụ nhọrọ echekwabara nke na -adịghị egwu, dị ka Deserve Classic Mastercard na kaadị Petal Visa. Emebere kaadị ndị a maka ndị na -enweghị akụkọ kredit ma nwee ike inyere gị aka iwulite kredit site na iji ha oge niile na ịkwụ ụgwọ gị n'oge n'oge kwa ọnwa.
Debe akụkọ ịkwụ ụgwọ n'oge ọ bụla, ka Messier na -ekwu, n'ihi na nke a bụ otu ihe kacha mkpa na -ekpebi akara kredit gị.
N'ikpeazụ, tụlee ịnweta ego mbinye kredit, nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta akụkọ kredit na-enweghị ọmụrụ nwa.
Mgbe ị wulitere kredit opekata mpe ọnwa isii, ị ga -enweta akara kredit FICO, nke nwere ike nyere aka melite ohere ịnweta ego mgbazinye ụgbọ ala n'ọnọdụ dị mma. Ozugbo akara gị dị 670 ma ọ bụ karịa , a ga -ewere ya dị ka ihe dị mma, nke ga -emepe nhọrọ gị karịa.
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji rụọ ọrụ na iwulite akụkọ kredit gị, tụlee ị nweta ego mgbazinye ụgbọ ala ugbu a site n'aka onye na -agbazinye ego ama ama ma lekwasị anya n'iwu kredit gị maka ọnwa isii na -esote otu afọ. Ozugbo akara kredit gị dị oke mma, ị nwere ike tinye akwụkwọ maka refinance mbinye ego, nke nwere ike ịchekwa gị nnukwu ego ma ọ bụrụ na ọ na -abịa na ọmụrụ nwa dị ala.
Agbanyeghị, mgbe ị na -azụ ahịa, gbaa mbọ mee ya ngwa ngwa.
Ekele maka ụfọdụ amụma mkpesa kredit, ọ bụrụ na itinye akwụkwọ maka mgbazinye ego akpaaka n'ime obere oge, ọ bụ naanị nyocha siri ike ka a ga -agụ na akara kredit gị, Messier kwuru.
Oge a na -adịkarị ụbọchị 14, mana ọ na -adịkarị ogologo oge.
Inweta ego ụgbọ ala akwụghị ụgwọ nwere ike ọ gaghị abụ ọrụ dị mfe ma ọ nwere ike were ogologo oge. Agbanyeghị, na ndidi, ị ga -enwe ike nweta ezigbo ego, ọbụlagodi na ị bụghị nwa amaala US. Naanị ị ga -achọta onye na -agbazinye ego ga -enyere gị aka.
Ego ole ka m kwesịrị ịzụta ụlọ?
Enweghị mgbazinye ego mgbazinye ego nkeonwe na USA
Ego ole ka ọ na -efu iji tee ụgbọ ala?
Insurance mkpuchi ụgbọ ala na -aga n'ihu - ihe niile ịchọrọ ịma
Kedu otu esi agbazite ụlọ na -enweghị akwụmụgwọ na USA?
Otu esi etinye akwụkwọ maka kaadị kredit Walmart